Kaadhimamtoonni Prezidaantummaa Ameerikaa Itti-aanuuf Dorgomaa Jiran Waa’ee Afrikaa Maal Jedhu? -
WASHINGTON, DC (VOA Afaan Oromoo) — Paartii Ripublikaanii irraa ka dorgomaa jiran – Donaald Traamp, filannoo kaadhimummaa ka Praaymarii jedhamu, kaleessa kutaalee shan keessatti geggeessame guutummaatti injifachuun, deggersa bakka-bu’oota isaanii 172-maa dhuunfachuun gara Paartii Ripublikaaniin kaadhimamuutti dhihaataa jiru.
Gama biraatiin, yeroo dorgommiin filannoo Yunaayitid Isteets kun itti fufaa jirutti, namni itti-aanee taayitaa Waayit Haawus qabatu, hegeree Afrikaaf maal harkaa qaba? Gaaffiin jedhu, yeroo dheeraaf lammiwwan Afrikaa hedduu gidduu deddeebi’aa ture. Kan as Waashinton keessa maadheffate – Dhaabbatni “Africa Ameerikaa Institute” jedhamu, dhiheenya kana lammiwwan Ameerikaa Prezidaantummaaf dorgomaa jiran shananuu waamee marii geggeessee ture. Lammii Ameerikaa hidda dhalata Laayibeeriyaa ka ta’an – Walaa Biligeey, dorgomaa kaadhimamtummaa prezidaantii ka dimookiraatotaa – Bernii Saandersiif gorsituu dha. Waa’ee walitti-bu’insa furuu irratti ilaalcha Saanders qaban akkanatti ibsan.
Yunaayitid Isteets poolisii Addunyaa maraa ta’uudhaan mootummoota bakka-buutee hoogganoota muuddi amantaa jedhu hin qabu. Waraansi furmaata xumuraa ta’a, amantaa jedhu illee hin qabu – jedhan.